Mampiaraka ry zalahy video - Ny LAHATSARY amin'ny CHAT-Fitiavana online!
Maimaim-poana: lalao telo ny familiarize themselves with ny Tsy misy Herisetra ny Fifandraisana ao amin'ny fianakaviana
Ary raha mila ny hanoanana dia tsy afa-po.")
Tsy foana ny tonga saina fa isika dia mety ho mahery vaika niaraka tamin'ny teny, na ho mahery setra hanoherana ny tena
Ny dingana ny herisetra ny fifandraisana (NVC) dia natao mba hanaraka ny ny endriny rehetra amin'ny fiainana.
Izany dia ny mitondra ny tena sy ny hafa tsy hanao zavatra noho ny tahotra ny famaizana, liana ny valim-pitia, na ny fahatsapana ho meloka, fa ny fikasany dia ny mahatakatra sy ny zavatra ilain ny olona rehetra.
Dia afaka miezaka ny ho velom-pankasitrahana ity namana serasera araka izay azo atao mandritra ny ady: dia izay mikasa ny ho mifandray amiko sy miaraka amin'ny hafa izay aho ao amin'ny ady ho antsika mba hahatonga ny fiainana ho tsara kokoa. Ohatra iray dia ny hoe: Rehefa tsy maintsy niampita ny arabe raha tsy misy mitady, izaho dia natahotra aho ary mila karakarao tsara ny tenanao.
Manontany anao aho t-hampitsahatra isaky ny amin'ny mpandeha an-tongotra hiampita ary jereo tsara avy eo sisa mialoha ny fitana.
Ny fanaraha-maso ny fizotry ny Tsy misy Herisetra ny Fifandraisana mitaky hita any amin'ny fiatombohan'ny rano miasa eo amin'ny voambolana ny fihetseham-po sy ny zavatra ilaina, ary koa ny fahaizany mamantatra ny hafatra izay manana hafatra izay maneho ny filàna. Tsoratra ny lisitry ny fihetseham-po sy ny manapaka avy ny endriky ny ravina hazo (ny dikany mifanaraka amin'ny taratasy) Ireo hazo roa misolo tena ny olombelona: ny voalohany rehefa mila afa-po, ny faharoa rehefa mila tsy ho nihaona.
Anao mety manoratra ao amin'ny vatan'ilay hazo ny voalohany,"Rehefa ny zavatra ilaina dia nihaona"sy ny vatan-kazo ny faharoa"Raha ny zavatra ilaina tsy nahavitana".
Hazavao fa ny fihetseham-po rehetra hanompo ny mailo amin'ny zavatra ilaina: ny mahafinaritra ny fihetseham-pony ny fanajana ny zavatra ilaina afa-po, sy ny tsy mahafinaritra fihetseham-pony momba ny unmet mila (dia afaka mangataka amin'ny ankizy ny fanontaniana hoe:"inona no tsapanao raha ny tokony hihinana afa-po.
Makà taratasy indray: vakio ny fihetseham-po izay no voasoratra ao aminy, ny mandray anjara amin'ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny fihetseham-po io, ny manahaka, mba hilazana toe-javatra izay fihetseham-po io dia za-draharaha. Indray mandeha io asa io amin'ny voambolana atao, miara-manapa-kevitra rehefa ny fihetseham-po io dia za-draharaha: rehefa misy mila dia afa-po, na rehefa misy mila dia afa-po. Inona ohatra tany aloha tany, na ny hita nilalao tao amin'ny tantara. Arakaraka ny valiny, mametaka ny ravina eo amin'ny sampana voalohany ny hazo amin'ny sampana faharoa ny hazo. Avelao ny ankizy mba handravaka, fandokoana, ampanjifaina ny lambam-pandriana (ohatra, ny loko dia mety ho voatendry ho amin'ny fihetseham-po mahafinaritra sy ny tsy mahafinaritra ny fihetseham-po ary avy eo dia manambany ireo loko araka ny hamafin'ny ny fahatsapana).
Kely ity lalao dia ny mamantatra ny sasany ny zavatra ilaina, mba hijery ny halehiben'ny izay ireo ka afa-po, ary mba hahita ny fomba hamahana tanteraka ny zavatra ilaina.
Izaho dia manoro hevitra anao mba misintona ny sarintany ny zavatra ilaina vokatry ny Tsy misy Herisetra ny Fifandraisana (vitsy filàna fototra izay hitondra antsika ny rehetra): mila karatra lalao CNV mba milalao ity lalao ity irery na miaraka amin'ny hafa, ary hanao toy ny maro karatra araka izay tianao.
Ny ankizy (avy enin-taona) ary koa ny olon-dehibe dia afaka milalao: ny zanany no mety ho mila fanazavana sy ny ny ohatra mba hanazava ny hevitry ny sasany, mila. Isika dia mila mahafantatra ny unmet mila mifandray AMIN'NY hafa, tsy MANOHITRA ny hafa: ny fitsarana, ny tsikera, diagnoses sy ny fanazavana eo amin'ny hafa, ireo rehetra fanehoana navily lalana avy ny zavatra ilaina. - Marshall Rosenberg Mifandray amin'ny tsy misy herisetra ny fifandraisana dia mitaky antsika mba hahita ny unmet mila izay miafina ao ambadiky ny tsirairay ny didim-pitsarana, satria ny ilaina dia ny fiainana mitady haneho hevitra. Avy ny fotoana ny olona hiresaka momba ny zavatra ilainy fa tsy noho ny hadisoana natao tamin ny hafa, dia ho lasa mora kokoa ny mahita ny fomba mba hanomezana fahafaham-po ny olon-drehetra. - Marshall Rosenberg, Dia afaka mampiofana ny tenantsika isika, tahaka ny lalao, miezaka mamantatra ny zavatra ilain'ny ny niandohan'ny misy hafatra. Io fahaiza-mamantatra ny zavatra ilain'ny hafa dia ny zava-dehibe maha-zava-dehibe eo amin'ny famahana krizy: ny hafatra Tsirairay, na inona na inona ny afa-po na ny endriny, dia ny fanehoana ny mila. - Marshall Rosenberg ity lalao Ity dia aingam-panahy avy amin'ny boky manaja Ray aman-dreny ny ankizy amim-panajana ny Surah Hart sy Victoria Kindle Hodson. Mpandray anjara tsirairay mahazo ny salohim-bary ny jackal sy zirafy (mba havoaka ao amin'ny boky voalaza, buy cv na mametraka ny tanana eo amin'ny cone ny zirafy sy ny totohondry clenched ny jackal) Ny mpanelanelana (kokoa ny olon-dehibe izay dia fantatry ny NVC) no ho tendrena, ary dia manazava ny fomba efatra mba hihaino ny hafatra araka ny Tsy misy Herisetra ny Fifandraisana (NVC): Ny mpanelanelana dia manome ohatra ny fiteny jackal sy zirafy sy ny mpandray anjara dia tsy maintsy mametraka ny sofina ho hita taratra ny fiteny ampiasaina. Ohatra: raha vao izany fitetezam-paritra efa vita, ny mpanelanelana mizara ny salohim-bary ny jackal ny olona sy ny salohim-bary ny jackal hafa. Tsirairay avy izy ireo kosa, ny mpandray anjara hafa miteny sarotra ny hafatra mba hihaino (ny fitsarana, ny tsikera, ny fahafaham-baraka, ny teny jackal). Ny olona izay manao ny salohim - jackal mamaly voalohany amin'ny sofina nivadika manoloana ny hafa, ary avy eo dia niaraka tamin'ny sofiny nitodika tany amin'ny tenany. Ary avy eo dia ny olona izay manao ny sofin ny zirafy mamaly miaraka ny salohim-bary nivadika manoloana ny hafa, ary avy eo dia niaraka tamin'ny sofiny nitodika tany amin'ny tenany. Misy olona afaka sary an-tsaina ny hafa fijerena: ny mpikambana rehetra manao ny salohim-bary zirafy, ary tsy maintsy mamaly ao amin'ny fiteny zirafy ho hafatra mahery vaika, natomboky ny mpandrindra ianao dia afaka mamorona ny fifanakalozan-kevitra ao izay isaky ny mpandaha-teny dia manao isan-karazany ny sofiny (iray tsy miteny izay teny jackal sy ny hafa afa-tsy ny fiteny ny zirafy) na mamorona ny fifanakalozan-kevitra ao izay isaky ny mpandaha-teny dia mitondra ny mitovy salohim-bary (na jackal na zirafy) ary avy eo dia afaka miresaka momba ny fitoviana sy ny vokatra voarakitra araka ny karazana teny ampiasaina. Ireo telo kely ny lalao hitondra ny kely (avy amin'ny enina fito taona), ary lehibe ny fomba fanao NVC. Azo aterina ao an-dakilasy sy ny ao an-trano mba hamoha ny ankizy sy ny tanora tsy misy herisetra ny fifandraisana, ny fianakaviana, na dia tamin'ny raharaham-barotra. Mandeha lavidavitra kokoa, ny boky dia Ray aman-dreny namana, zaza-namana (fanontana La Découverte) tolotra maro hafa ny lalao fanao amin'ny ankizy mba hanairana ny saina mikasika ny tsy misy herisetra ny fifandraisana. Tsara dia tsara toerana tena ilaina ho an'ny asa ny lehiben'ny sampan-Draharahan'ny Ray aman-dreny.
Tokony hijery ny teny frantsay ho an'ny fikambanana Tsy misy Herisetra ny Fifandraisana.
Raha tsy izany, misy iombonana mba hanapaka ao amin'ny boky izay lazaina ao amin'ny lahatsoratra. Izany dia mety ho sitrana amin'ny spikes ny dingana ireo sy hanolo toerana ny efitrano fianarana na ny an-trano izany toerana ho fanazavana ny zava-mitranga any etazonia.
Ny olon-dehibe koa ho toy ny ankizy dia afaka mandeha izy ireo rehefa kivy noho ny fihetseham-po mafy, ary izy ireo no mila aina ny mifantoka amin'ny ny fihetseham-po sy ny zavatra ilainy.
Maimaim-poana: lalao telo ny familiarize themselves with ny Fifandraisana, Tsy Ny herisetra ao amin'ny fianakaviana.
Ny firaisana ara-nofo amin'ny chat
Ny ambony toerana roa hiasa ho anao
Tsara indrindra ny vavy, tsy fantatra ny resaka, tsy hay hadinoina ny fahatsapana ny tontolo eto an-tany fahafinaretana ny taonjato faha-21 dia misokatra ho an'ny rehetra isaky ny hariva olona an-tapitrisany avy miasa amin'ny faniriana lehibe mba haka aina sy ny sorisory ao ny sisa ora alohan'ny hatorianaInona no ataonao amin'izao fotoana izao, angamba ny mijery ny hariva fandaharana amin'ny FAHITALAVITRA. Ianao ao amin'ny media sosialy. Ndeha isika hanova ny fialam-boly fotoana izao amin'ny fampidirana ny hariva erotica, ohatra, ny firaisana ara-nofo amin'ny chat, ny Firaisana ara-nofo amin'ny chat-virtoaly faritra amin'ny feno anarana. Izany dia manome anao fahafahana mba manadala ankizilahy miaraka amin'ny olona efa fantatra fa ara-bakiteny minitra. Tanora tompokolahy sy tompokovavy, vonona izahay mba hatsaraina ny fotoana malalaka.
Ny loharano dia tsy tapaka nitsidika hatramin'ny 500 mpandray anjara izay te-hiresaka Aminao.
Mifidy ny hatsaran-tarehy, manasa azy ho any amin'ny tsy miankina resaka manao ny nofinofy ho marina. Eo amin'izy ireo ny mpitsidika eo akaiky ny fifandraisana amin'ny vehivavy tsara tarehy. Miditra ao an-kaonty dia manome fahafahana hahazo ny asa rehetra sy ny endri-javatra. Ohatra, manome fanomezam-pahasoavana, pijery, sy ny ho irery.
Azo inoana fa, ianao dia tsy maintsy miandry akaiky tampoka
Rehefa sonia any, dia manana ny androm-piainany chat mpikambana, izay midika hoe afaka mitsidika ity tranokala ity amin'ny tsy hanahirana anao. Tsara homarihina fa amin'ny maro ny vavahadin-tserasera dia misy fizarana an-dobo sy tsy miankina iray: amin'ny raharaha voalohany, afaka ny ho tsy misy mpijery, eo amin'ny tranga faharoa, ny modely mifandray ihany no miaraka aminao. Isaky ny tambajotra, ny vola dia tsy ny robla no resaka, dolara amerikana na Euro, ary amin'ny tranga tsirairay dia antsoina hoe mitokana. Io vola azo jerena, manasa anareo aho mba tsy miankina ny fijerena. Misy tombontsoa. Ny iray amin'izy ireo dia ny fahazoana na aiza na aiza. Fotsiny ianao mila manana tsy tapaka ny fakan-tsary sy ny hahita ny tsara mpiara-mitory tamiko. Ankoatra izany, ny zava-misy dia efa miova ao amin'ny fangatahana.
Izany ihany koa miampy fa tsy mila hanorina toerana mba hitsena ny olona iray hiaraka aminy.
Izany dia azo atao amin'ny raha manana finday avo lenta na solosaina. Ihany koa ao anatin'ity lahatsary ity, ianao manana ny fahafahana mba hanafina ny maha-izy azy, sy Ny interlocutor dia tsy manambara ny zava-miafina. Ao amin'ny lahatsary, dia afaka manao na inona na inona zavatra mifandray amin'ny ny zavatra tianao. Fotsiny ianao mila ny mahita ny olona iray ihany ny miresaka.
Ahoana no hahafantatra ny ankizivavy. Vaovao mahasoa ho an'ny rehetra
ny lahatsary amin'ny chat tsy voafetra ho maimaim-poana Chatroulette maimaim-poana tsy misy fisoratana anarana an-tserasera ny lahatsary amin'ny chat Mampiaraka tsy misy fisoratana anarana ny lahatsary amin'ny chat room Mampiaraka ny ankizivavy maimaim-poana ny vehivavy te hihaona aminao Mampiaraka toerana tsy misy fisoratana anarana maimaim-poana velona stream ankizivavy video Mampiaraka Moscow video firesahana amin'ny efi-trano an-tserasera ny fampitana ny online chat roulette fisoratana anarana